Muta origami na origami site na akụrụngwa kachasị mma - Ikkaro
Origami ma ọ bụ origami
Origami… akwukwo ugbo elu na onu ogugu enweghi ike.
Kemgbe m dị obere, enwere m mmasị na origami ma ọ bụ nka Origami. Echetara m otu m si arụ ụgbọelu nke m, ụgbọ mmiri na tankị nke ndị agha m. Dịka nwatakiri m hụrụ ya n'anya.
Mana anyị anaghị ekwu maka naanị nsogbu dị mgbagwoju anya. Anyị chọrọ igosi na origami nwere ike ịdị mfe ma dịkwa mma maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ. Na-achọ origami maka ụmụaka? Ana m akwadebe ngalaba ahụ ka ụmụ gị nwee ike ịme ọtụtụ ọgụgụ site na nkwụsị.
Planesgbọ elu akwụkwọ, ụgbọ mmiri, na anụmanụ n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Echere m ụgbọelu mpempe akwụkwọ Ọ ghaghị ịbụ, yana eriri ụta, otu n'ime ndị mbụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị kọntaktị mbụ nke onye ọ bụla nwere origami. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike ịme ọtụtụ ụdị ụgbọelu mpempe akwụkwọ, wee ju ụmụaka anya mgbe ha gwara gị ka ị mee otu. Amalitere m n'ụgbọ elu ma nwee ọtụtụ ụdị ụgbọ elu akwụkwọ.
Otu adịghị ike m, ọ bụ ezie na anaghị m arụ ọrụ na ya, bụ anụmanụ ụmụ akwụkwọ.
Dị ka ọ na-adị mgbe niile, ọtụtụ oghere na-emeghe ime nnyocha na ịmụ ihe. Ọtụtụ ozi iji gosi gị na blọọgụ ahụ na ị na-enwe ya dịka m na-eme.
Otu esi eme ka snow Wars snowflakes
Ekeresimesi a ga-adị iche, enwere m ya doro anya. Ihe ịchọ mma ekeresimesi n'ụlọ bụ nke m. ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Maka ndị hụrụ origami n'anya ma ọ bụ Origami anyị na-ewetara ihe omume 3 n'efu na obere omume ga-akpọrọ gị n'ọkwa ọzọ ... ihe dịka Origami Jedi
Oke bekee gara aga bụ ihe atụ nke ihe a ga-enweta.
Ọ bụ ihe
Otu esi eme ka akwukwo na-efegharị
Ndị ọzọ ụgbọelu ọzọ maka akwụkwọ ụgbọelu akwụkwọ anyị na-eme.
Ọ dị mfe glider mere nke akwụkwọ.
Otu esi eme akwukwo pinwheel
Dị nnọọ mfe ma kwụ ọtọ, mana m na-eche na origami ma obu oriami ga-enwerịrị ka ị na-akpụ akpụ.
Foto a chịkọtara ya n'ezie,
Foto wepụtara site na Ofwa nke Paliku
Otu esi eme nshịkọ akwụkwọ
Oteela aka anyi nwere oru origami, ya mere taa anyi ewetara gi -esi mee ka a akwụkwọ nshịkọ. Anyị na-ahụkarị ụdị nshịkọ abụọ. Họrọ nke kacha amasị gị. Ana m ahapụ ọtụtụ vidiyo nke ọ bụla
[pụta ìhè] emelitere. Agbanweela m vidiyo izizi nke m debere na 2010. Enwere ọtụtụ vidiyo dị mma karịa taa, ha kwekọrọ n'ụdị mpempe akwụkwọ dị iche iche. Ya mere emelitere m edemede ahụ na ole na ole masịrị m. Nwee obi ụtọ na ha [/ pụta ìhè]
Ma m na-adọ gị aka ná ntị na ọkwa nke ọrụ a bụ ọkara-elu, yabụ enwela obi nkoropụ ;-) Na vidiyo ị nwere ike ịchọta usoro zuru ezu site na nkwụsị maka nhazi ya. Ọ bụrụ n’itinye aka ma ọ bụ ịnweghị usoro doro anya, ịnwere ike ịkwụsị vidiyo ahụ. Ọ bụ nnukwu enyemaka.
Otu esi eme helikopta akwukwo ulo
Karịrị helikopta m chere na ya a akwụkwọ autogyro. Ma ọchị m mere. Anyị nwere ike ịsị na ọ dabere na mkpụrụ nke maples, mana nke ahụ bụrịrị m echiche.
Ihe ndekọ ọhụụ Guinness maka oge ụgbọ elu nke ụgbọ elu akwụkwọ
Ntinye abanye na 27-11-2017 M na-agbakwunye ihe ndekọ ọhụrụ emere na ụgbọ elu nke ụgbọ elu akwụkwọ na afọ ndị a. Ndekọ nke ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme ka oghere akwụkwọ
Anyị egosiworị otu esi eme ụdị nke ụgbọ elu akwụkwọ, ụgbọ mmiri na tankị maka ndị agha anyị. Na ndị a niile ... Nọgidenụ na-agụ ihe